Blog-Tipping: Catalyze၊ ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံး ၀ င်သောကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခု Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 21, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါကတည်းကငါခဏတစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်တင်ရန် ငါလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲ၏ Tom Humbarger သတိပေးခံခဲ့ရသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း။ အလုပ်ပြောင်းခြင်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်နေ့တိုင်းအချိန်ပေးနိုင်သောပမာဏကိုများစွာတိုစေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကအခုလှည့်လာပြီ
ပထမ၊ ယခင် Blog-Tipping အပေါ်အကြံပေးချက်အချို့
ငါ Lendo.org မှာအင်ဒရီဆီကစာကိုရခဲ့တယ် ငါသည်သူ၏ site ကိုအတွက်အကြံပြုအပြောင်းအလဲများကို views ည့်သည်များနှင့်စာမျက်နှာအမြင်များမယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားလာသည်။ အန်ဒရေသည်တစ်နေ့လျှင် 290 ည့်သည် ၂၉၀ ခန့်နှင့်စာမျက်နှာမကြည့်မီစာမျက်နှာ ၇၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အခုတော့ Lendo.org ရှိပါတယ် တစ်နေ့လျှင်ထူးခြားသော visitors ည့်သည် ၁၂၀၀ နှင့်စာမျက်နှာ ၃၀၀၀ ခန့်ရှိသည်!!!
ဒီနေ့ငါသွားပြောမယ် Catalyze - စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့် UX ပညာရှင်များအတွက်အသိုင်းအဝိုင်း - ထူးကဲသောဆော့ (ဖ်) ဝဲဒီဇိုင်းကိုတီထွင်သောလူများ။ Catalyze သည်ဘလော့ဂ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအလွန်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကတွမ်ကကျွန်ုပ်ကို pinging လုပ်ပြီးစိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေသည်။
သငျသညျဤအမှုကိုရယ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါရိုးရိုးသားသား "UX" ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရှာတွေ့မှပတ်ပတ်လည်တူးခဲ့ကြ! အဲဒါဟာ User Experience အတွက်အတိုကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ ရှေးလူတန်းစားများက“ UX” ကိုရှာနေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များမှ“ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ” ကိုရေးချင်တယ်။ စသည်တို့ကိုစာမျက်နှာအတွင်းမှာ> acronym> tags ကိုသုံးချင်တယ်။ UX ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ဝေါဟာရနှင့်အတိုကောက်နှစ်ခုလုံးကိုတွားသွားနိုင်သည်။
၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်သင့်မူလစာမျက်နှာတွင် feed link များပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တကယ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ၊ နောက်ဆုံးဖိုရမ်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းနိုင်လျှင်စာဖတ်သူများအတွက်များစွာအကျိုးရှိသည်။
အဲဒီမှတ်စုမှာပဲငါတကယ်ကိုသင့်ဘလော့ဂ်ကနေ RSS feed ကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိပေမဲ့သူက browser (ဘရောက်ဆာ) များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သင့်ခေါင်းစီးမှာမပါဝင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ် browser (ဘရောက်ဆာ) အားလုံးသည်သင်၏စာမျက်နှာများခေါင်းစဉ်တွင် RSS link design ကိုရှာဖွေကြပြီးလိပ်စာဘားတွင် RSS subscription ခလုတ်ကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်ကုဒ်နှင့်တူသောအရာ:
လူတွေကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကို ၀ င်ဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ သင်မှာယူသူပိုရမယ်။ တူကိရိယာတခုခုကိုအသုံးပြုဖို့သေချာစေပါ Feedpress ပါ သင်စာရင်းသွင်းသူမည်မျှရှိသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်။
တကယ်လို့မင်းကမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို Google Bot ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့စာမျက်နှာကို“ Blog thumbarger” လို့ညွှန်းလိမ့်မယ်။ မင်းရှာနေတဲ့သော့ချက်စာလုံးမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များကိုစာမျက်နှာ၏အမှန်တကယ်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဆိုလျှင်၊ ဒီကိစ်စ: သငျသညျဒီဇိုင်းတွေးခေါ်ဖြစ်ပါသလား တွမ် Humbarger အားဖြင့်လက်ရှိဉာဏ်ပညာ Catalyze
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သင်၏စာမျက်နှာများတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမည်သို့အာရုံစိုက်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်စာမူ၏ခေါင်းစဉ်သည် class =” siblog_PostTitle” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုရှိကြောင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ မင်းကမင်းရဲ့လျှောက်လွှာတွေထဲကို ၀ င်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါဟာ blog post ခေါင်းစဉ်မှာ> h1> or> h2> tags ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာသေချာအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ခေါင်းစဉ်တပ်သောခေါင်းစဉ်များကို အသုံးပြု၍ ရေးသားချက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည်။
အခွင့်အလမ်းအရှိဆုံးရှိတဲ့စာမျက်နှာကသင့်ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်နိုင်တယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုမြင်သောအခါ၎င်းသည်လင့်ခ်များ၏ကြီးမားသောစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်များဖြင့် format လုပ်ထားသောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသင့်လျော်စွာ tag လုပ်ထားလျှင်၎င်းသည်အကြောင်းအရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့တွင် ပြက္ခဒိန် Subscribe link ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် link မှာဘာမှမပါတော့ဘူး။ ငါဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်။ ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့သင်တို့ကိုလည်းစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ဖျောပွသေချာစေရန်လိမ့်မယ်။
သင်၏စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံထဲသို့တူးဖော်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသောဇယားများနှင့်စားပွဲများကိုကြည့်သည်။ ကျွန်တော့် .NET developer များနဲ့ရိုက်ချင်သည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဒါကိုမကြာခဏတွေ့ရတာကနာကျင်ပါသည်။ .NET developer တစ်ယောက်သည် element တစ်ခုကိုရှာရန်ခက်ခဲသောအချိန်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်စားပွဲတစ်လုံးကိုလှဲချလိုက်သည်။
ဇယားများသည်ဒေတာအတွက်ဖြစ်သည်။ divs နှင့်စတိုင်လ်များသည်အကြောင်းအရာအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီဟာကိုစဉ်းစားပါ - သင်ဟာ search engine crawler တစ်ယောက်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးသင် index လုပ်ရန်အသုံးဝင်သောစာမျက်နှာတွင်ဘာပါ ၀ င်သည်ကို 'ကြည့်ဖို့' ကြိုးစားနေသည်။ Crawlers သည်စာမျက်နှာ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုယူသည်။ မည်သူကမည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုမည်သူမျှမသိသည်၊ သို့သော်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုသူတို့မယူကြပါ။ သင့် application တွင် formatting code များများစားစားရှိသောကြောင့်အကြောင်းအရာကိုအမှန်တကယ်ရှာရန်ခက်ခဲသည်။ ပြီးတော့သင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစာမျက်နှာရဲ့တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဤပုံစံသည် .NET ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အသုံးများသည်။ ၎င်းသည် application အားရေးသားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ crawlers ဖတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်နည်းလမ်းများရှိပါက၎င်းတို့အားအသိပေးပါ။
ငါတကယ်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရှာဖွေရန် "Powered by iRise" မှာထိပ်ဆုံးယူချင်ပေမယ့်စာမျက်နှာအလွတ်ချိတ်ဆက်။
သင့်တွင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ဖော်ပြချက်များအတွက်ရွေ့လျားသည့် Meta tag များရှိသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အများစုဟာအဲဒါတွေကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ သင့်ရဲ့ meta ဖော်ပြချက်သော်လည်းအချို့အလုပ်လိုအပ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့မင်းရဲ့ပြက္ခဒိန်စာမျက်နှာပေါ်လာရင်“ ဖော်ပြချက်” အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မယ် ဖြစ်ရပ်များ” ။ နင်ငါ့ကိုနင်ငါ့ကိုနှိပ်ရင်မင်းကိုမင်းမသေချာဘူး။ “ Catalyze event ပြက္ခဒိန်သည်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးအတွက်ပြည့်စုံသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာလား၊ စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိပညာရှင်များကိုစိတ်ဝင်စားသည်။
သင်၏ root directory တွင် robots.txt ဖိုင်မရှိပါ။ Robots.txt ဖိုင်များကသင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်များအားသင့်ဆိုဒ်အားမည်သို့ရှာဖွေမည်ကိုသိစေသည်။ Robots.txt တွင်အချက်အလက်များစွာကိုဤတွင်သင်ရှာနိုင်သည် အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ စာမျက်နှာ။
သင်၏ root directory ထဲတွင် sitemap.xml ဖိုင်မရှိပါ၊ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုညွှန်ပြရန် Robots.txt ဖိုင်မရှိပါ။ သင်၏ကွန်ရက်ရှာဖွေရေးယန္တရားကိုအဆင်ပြေစေရန်သော့ချက်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမြေပုံဆွဲရန်နှင့်အရာဝတ္ထုများ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေသည်။ Sitemap သည်သင်၏ site သို့သွားသောလမ်းပြမြေပုံဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက Search Engines သည် link အားဖြင့်သာရှာဖွေနိုင်သည်။ အဘယ်အရာသည်အရေးကြီးသည်ကို၎င်း၊ ဆိုက်ကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းသည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွက်သင်လုပ်နိုင်သောအရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်နိုင်သည်။ မှာဖတ်ပါ Sitemaps.org
ငါကဒီနောက်ဆုံးအချက်ကိုခန့်မှန်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့် Catalyze မှာ back-end tools တွေမပါ ၀ င်မှုကြောင့်သင်၏ site သည် Google Blogsearch နှင့်သင့် site ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များရေးသားသည့်အခါအဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကို pinging မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ဖန်သင်၏ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကွန်ယက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းသည်ဘယ်တော့မျှထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်တွင်ဆိုက်တစ်ခု၊ တွမ်ရှိသည်၊ သို့သော်မည်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းတည်ရှိသည်ကိုမည်သူမျှမသိပါ။ သင်၏ site ရှိ SEODigger ကိုကြည့်ပြီး“ Catalyze” အတွက်သာတက်သည်။ သင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအဆင်ပြေစွာမရရှိလျှင်ထိုအရာအားလုံးသည်အလဟ is ဖြစ်သွားသည်။ Catalyze သည်သင်၏သော့ချက်စာလုံးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသင်စဉ်းစားနေပါကaကိုကြည့်ပါ ရှာဖွေရေးကိုနောက်ပြန် သင်၏ site ပေါ်တွင်သင်အဘယ်ကြောင့်မြင်လိမ့်မယ်။
ကံအကောင်းဆုံး သင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်သင့်တွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအရင်းအမြစ်များရှိပါသလား၊ သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာကိုတီထွင်သောကုမ္ပဏီမှသင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မသေချာသော်လည်းလုပ်စရာများစွာရှိပါသည်။
Tags: Blog တင်ရန်Blog အကြံပေးချက်များဓာတ်ကူပစ္စည်း
23:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 49
ဟုတ်တယ်! အကြံပြုချက်များသည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အတွက် ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်သည် တစ်နေ့လျှင် ထူးခြားမှုများ 2000 ရရှိရန် ကြိုးစားနေပါသည်။